Ukubuka isixeko, indawo ebukekayo - I-Airbnb
Ukubuka isixeko, indawo ebukekayo
Iflethi okanye indlu ekwicomplex evalekileyo ibe iphantsi kophahla ibe iyathandeka xa ibonakala kakuhle kwidolophu yethu encinci. Inothando yaye ifenitshala ukuze uzive ukhululekile. Ikona yasekhitshini ikuvumela ukuba uziphe ukutya. I-microwave, isitovu esineoveni, iketile, umatshini wokwenza ikofu, ifriji ziyafumaneka. Kukwakho neTV enonxibelelwano lwe-satellite kunye nomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu. Indlu ithe cwaka kwaye ikwindawo yokuhlala ethe cwaka.
Ndijonge phambili ukukubona kungekudala!
Inegumbi lokuhlambela elinebhafu kunye negumbi elinendawo yokupheka neyokulala kunye nesofa encinci enekona yeTV kunye netafile evulekileyo enezitulo eziyi-2 onokusebenza kuzo. I-WiFi iqukiwe. Ungapaka esitratweni phambi kwendlu. Ithala elincinci lingasetyenziswa okwethutyana.
Okokuqala, izinto ezisisiseko:
Ivenkile yokutyela enamathuba okufumana isidlo sakusasa okanye imiqulu imalunga ne-100 m. Iivenkile ezinkulu eziyi-3 zikumgama weemitha eziyi-250 ukuya kweziyi-250. Iivenkile zokutyela eziyi-4 (iJamani, iGrike, i-Italy, i-Thai) zikumgama we-100 ukuya kwi-350 m. Ivenkile ye-kebab yendlala ekhawulezayo ikumgama we-100 m.
I-Hadamar ilungelo lesixeko ukususela ngo-1324 kwaye ikwi-Elbach. Le dolophu incinci inenqaba yeRenaissance (1590), iLiebfrauenkirche (1376), iHerzberg Chapel (1676), iAegidienkirche (1632), isakhiwo seMar Install esineemyuziyam zedolophu kunye nemyuziyam yebhedi (Dec./Jan.), igadi entle yeentyantyambo ene sq sqm kunye neKonvikt njengesihlalo seLimburg Domsingnaben. Uhambo lwesixeko lunokwenzeka ngamalungiselelo. Jonga iphepha lokuqala leSixeko saseHadamar. Nakule imeko, iLimburg (iikhilomitha eziyi-8) kunye neLimburg (iikhilomitha eziyi-12), zombini iidolophu ezintle eziseLahn zikufutshane kwaye zilindele ukutyelelwa.
Sihlala kwindlu enye kumgangatho wokuqala. Ukuba unemibuzo, kakhulu sisekhaya, phantse sisoloko sifumaneka. Kodwa shiya iindwendwe zethu zodwa. Ungangena nanini na usebenzisa ibhokisi enesitshixo nanini na ngexesha lokubhalisa xa ufika nelokuphuma. Xa lifika emva kwexesha okanye kwangethuba. Ukususela nge-27 kaMeyi, intombi yam iza kuba ngumntu ekunokuqhakamshelwana naye.
Sihlala kwindlu enye kumgangatho wokuqala. Ukuba unemibuzo, kakhulu sisekhaya, phantse sisoloko sifumaneka. Kodwa shiya iindwendwe zethu zodwa. Ungangena nanini na usebenzisa ibhok…